स्वास्थ्य पेज » प्राकृतिक विधीबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? प्राकृतिक विधीबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? – स्वास्थ्य पेज
प्राकृतिक विधीबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा राजेन्द्र कोजु भन्नुहुन्छ–‘उच्च रक्तचापको अवस्था हेरेर औषधि खाने वा जीवनशैली परिवर्तन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । यद्यपि औषधि सेवन गरेपछि स्वस्थ जीवनशैली भने अपनाउनैपर्छ ।’
उहाँका अनुसार यसको लागि सबैभन्दा पहिले उच्च रक्तचाप के कारणले भएको छ पत्ता लगाउनु पर्छ । जस्तो अन्य विभिन्न रोगहरुका कारणले रक्तचाप भएको छ भने सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या निको भएपछि यो पनि स्वतः निको हुन्छ । रक्तचापको यस्तो कारण १० प्रतिशत जति हुन्छ ।
बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रक्तचापको कारण हाम्रो खराब व्यवहार र चलनचल्तीका कारण हुन सक्छ । जस्तो, धेरै चिन्ता लिने, धुम्रपान गर्ने, नुन धेरै खाने मोटोपना जस्ता कारणले उच्च रक्तचाप बढेको हुन्छ । यसरी बढेको रक्तचाप सुरु भइसकेपछि नियमित औषधि खाएर मात्रै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ जीवनशैली सुधारेर यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्न ।
धेरैजसोको खानामा ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिड (फिश आयल)को मात्रा कम हुन्छ । यसको आपूर्तिका लागि माछा सेवन गर्नुपर्छ । यद्यपी माछा तारेर होइन, उसिनेर सेवन गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यसो त ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडका लागि फिस आयल ट्याब्लेट पनि पाइन्छ । यद्यपी यस किसिमको ट्याब्लेट सेवन गर्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
तनाव कम गर्नु गाह्रो लाग्नसक्छ । किनभने तनाव लिन नचाहेर पनि हामीलाई तनाव भइरहेकै हुन्छ । तनाव नियन्त्रण गर्नु भनेको तनाव व्यवस्थापन गर्नु हो । तनाव हरेकलाई हुन्छ तर त्यसलाई कसरी लिने ? यो मूख्य कुरा हो । हामी दैनिक व्यवहारमा अनेक कारणले तनावमा पर्छौं, तर तनाव लिनु कुनै समस्याको समधान होइन । तनाव लिएर कुनै समस्या हल हुँदैन । त्यसो भए किन तनाव लिने ?
कुनैपनि कुरालाई अलि सहज र सरल ढंगले ग्रहण गर्दा पनि तनाव कम हुन्छ । काम गरेको बेला रमाइलो गरौं ।
शरीरलाई आनन्द हुने कतिपय प्राकृतिक विधी छन्, त्यसलाई अपनाएर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
चुरोटको सेवनले उच्च रक्तचाप ह्वात्तै बढाउँछ । यसमा रहेको निकोटिनले उत्तेजक बनाउँछ ।
कफी, सोडा जस्ता पेय पनि उच्च रक्तचाप बढाउने कारण हुन् । किनभने यसमा क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । क्याफिनले स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित बनाउँछ ।
चुरोट जस्तै मदिराजन्य पेयले पनि उच्च रक्तचाप बढाउँछ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि मदिरा छाड्नैपर्छ ।
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार प्रकाशित